चट्याङले भारतमा एकैदिन १०७ को मृ’त्यु भयो, चट्याङबाट बच्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/चट्याङले भारतमा एकैदिन १०७ को मृ’त्यु भयो, चट्याङबाट बच्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त?
काठमाडौं: भारतमा वर्षासँगै परेको चट्याङले लागेर बिहीबार एकैदिन १ सय ७ जनाको मृ्त्यु, भएको छ। क्षतिको विवरण संकलन भइरहेकाले मृ,तकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको त्यहाँका अधिकारीको भनाइ उधृत गर्दै भार तीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।उसो त नेपालमै पनि चट्याङले बिहीबार सप्तरीमा एकैदिन चार जनाको ज्या’न गएको छ। यसअघि पनि ठाउँ ठाउँमा दुई/चार जनाको मृ,त्यु भइ नै रहेको छ। अहिले मनसुनका बेला वर्षाका कारण अन्य विपत्तिका जोखिम त छँदै छ, साथै चट्याङबाट बच्ने उपा यमा पनि हामीले ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ।
उसोभए चट्याङबाट बच्न के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त?
–सबैभन्दा उत्तम र सुरक्षित उपाय भनेको घरभित्र बस्नु हो, वर्षा भएका बेला सबै झ्याल/ढोका बन्द गरेर घरभित्रै बस्ने।–अग्लो स्थानमा नजाने, किनभने चट्याङ माथि आकाशबाट तल झर्ने भएकाले अग्लो स्थानमा बस्दा त्यसले चाँडो भेट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले रूख, बिजुली खम्बाजस्ता अग्ला चिजको मुनि पनि नबस्ने।
–चट्याङ एउटा विद्युतीय प्रवाहजस्तै वस्तु भएकाले विद्युत् प्रवाह हुने कुरा नखेलाउने । जस्तै : पानी । हिजो सप्तरीमा एक जना नदीमा नुहाउन गएका बेला मृत्यु भएको खबर आएको छ। यसो भनेर बाल्टिनको पानी पनि चलाउनु हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । तर विद्युत् प्रवाह हुने किसिमको पानीमा जानु भएन। जस्तो : बाथरुममा नुहाइरहनुभएको छ भने पानीको धाराबाट विद्युत् प्रवाह हुन सक्छ र त्यसले चट्याङ आकर्षित गर्न सक्छ।
–यस्तै विद्युत् प्रवाह हुने फलामजस्ता वस्तुबाट पनि बच्नुपर्छ। हामीले ओढेको छाताको टुप्पोमा फलाम हुन्छ, चट्याङ परेका बेला त्यस्ता वस्तुले पनि त्यो तान्ने जोखिम हुन्छ। यस्ता कुरामा पनि विचार पुर्याउनुपर्यो।–घरबाहिर छौं भने खुला स्थानमा टुक्रुक्क बसेर दुवै घुँडामुनि टाउको छिराएर बस्ने गर्दा पनि सुरक्षित हुन सक्छौं।
-यस्तै हिँड्दा पनि खाली खुट्टा हाेइन, जुत्ता-चप्पल लगाउनु सुरक्षित हुन्छ। नांगो खुट्टामा विद्युत प्रवाह हुने डर हुन्छ।-खेतमा काम गरिरहेका छौं भने गड्याङगुडुङ गर्न थाल्यो भने ‘केही हुँदैन’ भने बस्न हुँदैन। घर गइहाल्नुपर्छ।–वास्तवमा चट्याङबाट कसरी जोगिने भन्ने सम्बन्धमा जनचेतना आवश्यक देखिन्छ।
कतारले दिएका सहायता सामग्री लिएर नेपाल आइपुग्यो जहाज
घरबेटीको यस्तो बिज्ञापन जहाँ दलितलाई कोठा नदिने भनेर यस्तो लेखिएको थियो